Air Suspension Compressor, bellow Air Spring, Convoluted Air Spring - TFD
Uwe Type Air Spring
n'ihi na Audi
n'ihi na BMW
N'ihi Hyundai Kia
n'ihi na Jaguar
N'ihi Land Rover
n'ihi na Lincoln
N'ihi na Mercedes-Benz
AIR nkwusioru Compressor
AIR mmiri usoro
AIR nkwusioru usoro
Mmadụ Bịa na anyị ụlọ ahịa!
S henzhen TFD ulo oru Co., Ltd. bụ a n'ichepụta ụlọ ọrụ, bụ ọkachamara mmepe & nnyocha na ahịa ọrụ nke Air ikuku vibration akara ngwaahịa. The ngwaahịa nakwa dị ka elu uzu na-ọtụtụ eji na azụmahịa, njem ụgbọala na ulo oru ubi.
ONE Kwụsịnụ ike ọrụ
Anyị na-arụ ọrụ na-agbakwunye uru ahịa na ndị ọzọ aka.
Anyị kweere na àgwà bụ ihe niile. Ọ bụ otu ihe kasị mkpa anyị niile mkpebi, ihe isi mmalite anyị na-azụta, otú anyị anapụta ha gị.
Nnyefe ON-TIME ukwuu!
On-oge nnyefe bụ mgbe isi nchegbu anyị side.We ọrụ na ihe ọkachamara logistic nhọrọ, anyị mkpara na-24-awa na-ekiri etinyewe.
Anyị na-enye ihe kasị mma oru nkwado na anyị ngwaahịa agafeela echesinụ oru nnyocha.